I-1-10 yoluhlu lwe-1213731
Yindlu e studio eqaqambileyo yokurenta eCricklewood
Esi sakhiwo shushu sisitudiyo siseMelrose Avenue, eCricklewood sigciniwe. Ipropathi eqaqambileyo inomhlobiso omtsalane, kunye nomhlobiso wesitayile kunye nempahla yefashoni. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo, kwaye kukho igumbi lokuhlambela eli-1 elinobuhle kunye neshawari. ICricklewood yindawo yokuhlala ...
ILondon (eUnited Kingdom), NW2 4LY
E papashwe ngu UFleyley Cole
Ipropathi ye-3 bhk iyafumaneka kwirente eJanakpuri, Delhi Inendawo eyakhiweyo ye-1350 sqft kwaye iyafumaneka ngerenti ngee-Rs 35,000 ngenyanga Indlu inempahla encinci iyipropathi ekulungele ukuhambisa-kuyo ixesha oza kulisebenzisa apha liya kuba lelona xesha libalaseleyo lobomi bakho neliza kunceda ...
umbono Izindlu ishicilelwe iiyure 22 eyadlulayo
Inommandla we-1000 sqft Ipropathi ifumaneka kwirenti yenyanga eyi-Rs 16,000 indlu inefenitshala ephantsi ijonge kwicala elingasemazantsi Le ndawo yokuhlala ilungele ukuhambisa-Yenziwe ngendlela yokubonelela ngendawo yokuhlala efanelekileyo Ime kufutshane nayo yonke into ebalulekileyo ...
Inomakhi womgangatho wokwakha oyi-1k e-Govindpuri, Delhi Inommandla angama-250 sqft kwaye iyafumaneka ngerenti ye-Rs 6,500 3 Indlu inemigangatho yephakathi kwaye ineminyaka emi-XNUMX ilungele ukuhambisa-in yenziwe yenziwa Indlela yokubonelela ngobomi obutofotofo kubahlali Ime kufutshane kuko konke ...
Si 2 bhk multistorey efulethini namhlanje iGenesis Global, Ulwe, iMumbaiIne inendawo eyi-1170 sqft kwaye ifumaneka kwirenti yeRs 12,000 Indlu ayivelwanga umnyango wayo ophambili ujonge kwicala lasempuma-ntshona Ngu-2 iminyaka ubudala ulungele Ipropathi -mkile-in Idityaniswe kakuhle kwiindawo zedolophu ...
Yakhelwe ngokufanelekileyo i-3 bhk indlu e-multistorey ifumaneka kwindawo eyi-Bhagwati I-Imperia Inendawo ye-1650 sqft kwaye iyafumaneka kwirenti yee-Rs ezingama-20,000. Ukuhambisa-kwipropathi yenziwa ngendlela ukubonelela nge ...